लक्षभन्दा ३९ प्रतिशत बढि मुद्धा फछ्र्यौट::Online News Portal from State No. 4
लक्षभन्दा ३९ प्रतिशत बढि मुद्धा फछ्र्यौट
बागलुङ, १ चैत – उच्च अदालत बागलुङ इजलाशले चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्त सम्ममा लक्षभन्दा ३९ प्रतिशत बढि मुद्धा फछ्र्यौट गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्त सम्ममा १ सय ९ मुद्धा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष लिएको इजलाशले १ सय ५१ मुद्धाको फैसला गरेको छ । अदालतले लिएको लक्ष अनुसार यो अबधिमा ४२ वटा बढि मुद्धा फछ्र्यौट भएका हुन् ।
अदालतमा २ सय ७६ मुद्धा दर्ता भएका थिए । हालसम्म १ सय ५१ मुद्धाको फैसला भैसकेकाले अब १ सय २५ मुद्धा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको रजिष्ट्रार ध्रुव कुमार ढकालले जानकारी दिए । यो अवधिमा अदालतले १ सय ८ वटा सरकारी फौजदारी, १६ वटा दुनियाँबादी, ८ वटा दुनियाँवादी फौजदारी र १९ वटा रिट फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ ।
ढकालका अनुसार ५९ वटा सरकारी फौजदारी, ३१ वटा दुनियाँवादी, १८ वटा दुनियाँ बादी फौजदारी र १६ वटा रिट फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा झण्डै १ सय २५ प्रतिशतले मुद्धा बढेको अदालतले जनाएको छ । २ सय ५१ मुद्धाको लक्ष लिएको अदालतमा २७६ मुद्धा दर्ता भएका छन् ।
सावधान ! भान्सामा विषादी
एसआईभि बाट संक्रमिण गोपाल श्रेष्ठले गरे सगरमाथा आरोहण
साँघुरो सडकले दुर्घटनाको चिन्ता
रिक्सारोहणमा शेरबहादुर देउवा शेरबहादुर देउवा अर्थात् रिसका पिरामिड ती बितेका केही दिनदेखि...
बागलुङ बजारमा चुस्त बन्दै ट्राफिक नियम बागलुङ, ९ जेठ – सडकमा हुने ट्राफिक जाम हटाएर...
पत्रकार महासंघ भवनका लागि ‘धौलागिरी फेस्टिबल’ बागलुङ, ८ जेठ – नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाले...
बागलुङ, रुकुम र रोल्पालाई लक्षित गरि टेलिकमले सेवा विस्तार गर्दै बागलुङ, ८ जेठ – नेपाल टेलिकम बागलुङले आफनो सेवा...
बद्लिँदो मनोविज्ञान पाँचथरको मिक्लाजुङ–३ आरुबोटेमा दुई परिवारका नौ जनाको हत्या भयो...